Qaabka loo yaqaan 'Letterpress' waa qaab mar kale la xidho | Abuurista khadka tooska ah
Qaabka loo yaqaan 'Letterpress' waa qaab mar kale la xidho
Qaabka Warqad-qoriddu waxay ku saabsan tahay farsamo, kaas oo bixiya suurtagalnimada daabacaadda adigoo riixaya dusha sare si loo daabaco, si xardho raadkiisa iyo qaabkiisa labadabaIntaa waxaa dheer, habka daabacaadda waxaa lagu sameyn karaa khad la'aan ama khad la'aan.
1 Waa maxay Waraaqaha Warqaddu?
2 Sidee loo sameeyaa Xaraashka?
3 Maxay yihiin waraaqaha ku habboon ee lagu riixayo waraaqda?
3.1 Warqad Fibre ah
Waa maxay Waraaqaha Warqaddu?
"Xarafka" ayaa ka kooban Magacaabista Ingiriisiga kaas oo u janjeera in loo turjumo "warqad riix".
Sidoo kale, qaabka Warqadda badanaa waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee loo adeegsado naqshadayaasha taas oo caadiyan la shaqeysa xarfaha, maadaama mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee loo adeegsado ay ugu wacan tahay xorriyadda ay bixiso marka la abuurayo xarfaha.
Sidee loo sameeyaa Xaraashka?
Farsamada asalka ah ee qaabka Letterpress, waxay isku dayeysaa inay Samee naqshadeynta adoo adeegsanaya wasakhaha warqadaha ama qurxinta qaar, oo badanaa lagu sameeyo leedhka ama alwaaxda u isticmaali kara khad, ka dib iyo marka la adeegsado cadaadiska, awoodda si toos ah naqshad daabacan lagu sawiray warqad.
Maaddaama khadku uusan si siman ugu faafin naqshada oo dhan, cilladaha yar yar Markay caaryadu xiriir la yeelato warqadda, cilladahan ayaa mas'uul ka ah siinta shakhsiyadda daabacaadda noocan ah, taas oo ah sababta ay ugu soo baxaan inay aad u jecel yihiin dadka doorta Waraaqda.
Sidoo kale, marka laga reebo khadka lagu miiro warqadda, waxaa sidoo kale jira qaar moolka yar ee goobta halka ay xiriir ka sameysaneyso caaryada.
Haddii warqaddu isu rogto inay ahaato mid qaro weyn leh oo leh suufka suufka, waxaa suurtagal ah in la helo a Saamaynta gargaarka oo hooseeya kaas oo ku daraya dardar badan marka la helo natiijada kama dambaysta ah. Iyo sidaan horay u soo sheegnayba, Warqad-qorid waxaa lagu samayn karaa khad la'aan ama khad la'aan; Xaaladda aan lahayn khad, waxaa loo yaqaan "embossing" ama "dharbaaxo qallalan".
Maxay yihiin waraaqaha ku habboon ee lagu riixayo waraaqda?
Waxaa jira noocyo kala duwan oo suuqa ku yaal oo u heellan sameynta waraaqo ku habboon daabacaadda waraaqaha, iyadoon loo eegin midka la doorto, waa inay buuxisaa astaamaha soo socda:
Warqad Fibre ah
Ay tahay in waxay leeyihiin waxyaabo badan oo ah fiilooyin cudbi ah, maaddaama ay lagama maarmaan tahay in fiber-ka warqaddu u adkeysan karto cadaadiskan iyada oo aan la jebin ama dillaacin.
Waa inay lahaataa dhumuc ku filan, maxaa yeelay sidaan horeyba u soo sheegnay, marka la isticmaalayo aragtida noocan ah, a labadaba bas-gargaarka iyo saameynta gargaarka. Miisaannada ugu badan ee loo isticmaalo daabacaadda waraaqaha ayaa caadi ahaan ah 350-400gr, in kasta oo ay suurtagal tahay in la helo waraaqo qiyaastii ah 600gr.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Qaabka loo yaqaan 'Letterpress' waa qaab mar kale la xidho
Qaar ka mid ah istuudiyaha animation-ka ee runtii mudan in la ogaado
Nidaam hal abuur leh oo loogu talagalay abuurista animation wareeg ah ama GIF